နေအိမ် » မိန်းကလေးဂိမ်း » Winx Club ကဂိမ်း: ငါ့အ Fairy ပေ
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Winx Club ကဂိမ်း: ငါ့အ Fairy ပေ
ဖေါ်ပြချက်: သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ Fairy ပေများအတွက်ဂရု!
ထိန်းချုပ်ရေး: This game use mouse to play.
ကစား: 395,457 tag ကို: winx, winx club, winx games, winx club games, pt games, မိန်းကလေးများ, pet care
မင်းသားကယ်တင်ရန် Barbie မင်းသားစီးနင်း, သင်လမ်းပေါ်တွင်သစ်လုံးကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်မြင်းများအဘို့အသီးကိုစုဆောင်းရန် Barbie ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ခုန်ဖို့ Space Bar ကိုနှိပ်, ရွှေ့ဖို့ mouse ကိုသုံးပါ။
ဒီရေချိုးယူမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ဘွယ်ကောင်းသောကလေးတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးသူမရေနှင့်အတူကစားခြင်းအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားသည်။ ဒီကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောမိန်းကလေးဂရုစိုက်ပါ။ ဂိမ်းထဲမှာပေးထားတဲ့အဆင့်အောက်ပါအားဖြင့်ချစ်စရာကလေးနှင့်အတူပျြောရေချိုးရှိသည်။ ထိုအတူသူမ၏ကောင်းစွာတက်ဝတ်စားဆင်ယင်
အားကစားကြယ်ပွင့် 2014 ခုနှစ်, barbie
Barbie ဘရာဇီးမှာကမ္ဘာ့ဖလားကျင်းပဖို့သူ၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူဘောလုံးပွဲသို့တက်ရောက်ရန်လိမ့်မည်။ Barbie ကြွလာတော်မူခြင်းမပြုမီရဲ့လုံးဝအစေးဖြိုဖျက်သူမ၏ဖက်ရှင်ကြည့်ယူကြကုန်အံ့။
Pucca စင်မြင့်အတွက်စုပေါင်းအားလုံးနှလုံးအားဖြင့်နည်းလမ်းရှာကိုကူညီပါ။ အခြားတံခါးကိုမှစတင်တံခါးမှရွှေ့ဖို့ရှိသည် Pucca ။
Swiper ဒိုရာမှကျောက်မျက်ခိုးယူသူသည်သစ်တောမှလွတ်မြောက်ရန်။ သူကသူ့ပိုင်နက်မှာရှိသမျှကိုကျောက်မျက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒိုကျောက်မျက်ကွယ်ပျောက်လျက်ရှိရာအရပ်ရောက်ရှိရန်ပြီးပြည့်စုံခြင်းဖြင့်ကျော Swiper မှအားလုံး task ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ကျောက်မျက်စုဆောင်းကိုကူညီပါ။ Swiper အခါ, ဒိုမီလိုက်ကြကုန်အံ့မနေပါနဲ့
ဒိုရာကျောင်းမှစွန့်စားမှုတစ်ခုပျော်စရာပလက်ဖောင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးဒိုအတားအဆီးများရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်သူမ၏လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ကူးကိုကူညီပါ။ ဓာတ်လှေကားကို ယူ. အတားအဆီးများရှောင်ရှားဖို့အချိန်တန်ဤနေရာသို့သွားရန်။ သငျသညျအသီးအသီးအဆငျ့ရှင်သန်3အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
သင်အကြိုက်ဆုံးဒိုစီးနှင့်သူမ၏အဟာရီကိန်းလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပေးပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စီးနင်းစတင်ရှေ့၌သင်တို့အကြိုက်ဆုံးစက်ဘီးကို Select လုပ်ပါ။ မှတ်ဂိုးသွင်းဖို့အဝါရောင်ကြယ်များစုဆောင်းပါ။ သင့်ရဲ့အာနိသင်တိုးမြှင့်အာဏာကိုဖြည့်စွက်ဖို့အနီရောင်ကြယ်များစုဆောင်းပါ။ သငျသညျအသီးအသီးအဆငျ့ရှင်သန်ရန်သာသုံးဘဝတွေကိုရှိသည်။ ရှိ
လူအားလုံးတို့သည်ဒစ္စနေးကြယ်တို့သည်သင်ရုံဆင်တူပုံရိပ်တွေရှာဖွေကိုက်ညီငါ့ကောင်းသောမှတ်ဉာဏ်ကိုသုံး, တူညီတဲ့ image ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒီဂိမ်းထဲမှာပေါ်လာပါ။
သငျသညျသူမ၏မျောက်ဖိနပ် မှလွဲ. ဒိုနောက်ထပ်သုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိကြောင်းသိခဲ့ပါသလော သူမဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြောင်, တစ်ဖော်ရွေခွေးကလေးနှင့်ချစ်စရာဟမ်းစတားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒိုရာတွေအများကြီးခရီးထွက်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူမ၏နည်းနည်း fluffy မိတ်ဆွေများဖို့လုံလောက်တဲ့အာရုံစိုက်မှုမဆပ်နိုင်။ သငျသညျ Do ဂရုစိုက်လိမ့်မည်
အမ်မလီရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Adventue ။ အနည်းငယ်သောမိန်းကလေး Emily ဂြိုလ်သားကျူးကျော်မှကမ္ဘာ့အကိုကယ်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ကူညီရန်သင့်အား Point-and-click နှိပ်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ!
နာမည်ကြီး Candy Crush ၏တစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသောအွန်လိုင်းဗားရှင်း။ ဤသည်စတင်တာအကောင်းဆုံးဂိမ်းယခုနှစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သကြားလုံးနှိပ်စက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအဆင့်ဆင့် throuh ရ။